The First Train Njem Ever Mere Na Italy | Save A Train
Home > Travel Europe > The First Train Njem Ever Mere Na Italy
Italy nwere ụfọdụ magburu onwe ụgbọ okporo ígwè njem. Ọ nwere ọtụtụ mara mma ụgbọ oloko na enwekwa ụgbọ na mba, ma ebe e mbụ ụgbọ okporo ígwè na njem mgbe mere na Italy?
The First Train Njem Ever Mere na Italy – Mmalite
The mbụ ụgbọ okporo ígwè na njem mgbe mere na Italy introduced railways was when Italy was a divided obodo. O were ụfọdụ afọ ejikọta na jikọọ na ẹdude ụgbọ okporo ígwè edoghi mgbe Italy n'otu. Traingbọ okporo ígwè mbụ Italytali wuru bụ Naples ruo Portici nke dị n'Alaeze nke Sicilies Abụọ ahụ. The akara bụ 7.25 Kilomita ogologo. The akara eguzobe on 3Rd October na 1839. Nke a bụ 9 afọ mgbe mbụ "oge a" n'ime obodo akara, e wuru nke bụ Liverpool na Manchester Railway.
The mbụ track bụ a abụọ track na ọ efehe site ugbu a na saịtị nke Corso Garibaldi na Naples na Royal Obí na Portici. Obí eze bụ na ụkwụ nke ama Ugwu Vesuvius gbawara. Mbụ ndị mmadụ mere na ụgbọ njem Italy ebe a, na a akara ugbu a Nleta akụkụ nke Naples-Salerno ụgbọ okporo ígwè akara.
Naples na Salerno Ụgbọ oloko
The Naples-Salerno ụgbọ okporo ígwè akara bụ isi ụgbọ okporo ígwè akara na Italian okporo ígwè netwọk today and has a place in The First Train Trip Ever Made in Italy. Ọ Nleta a njikọ na isi ogwe akara Southern Italy. The akara mbụ kilometa bụ nke mbụ ụgbọ okporo ígwè akara. Ndị mmadụ na ugbu eji ụgbọ okporo ígwè ka otu n'ime ndị kasị maara nke ọma na ebe, a famous coastal town called Amalfi in the region of Campania. Ọ bụ a ikpọ ala gbara osimiri okirikiri obodo. Ọ dị mma ikwu na ụgbọ okporo ígwè na njem ka e tinyere oké osimiri bụ nnọọ otu ihe ahụ. Eche crystal mmiri, ọcha ájá na lush greenery na na n'etiti ụfọdụ mara mma ochie ọhụrụ ije. Ị ga-na ụzọ gị na-eche ụgbọ oloko gị njem si Naples na Salerno, ebe ị ga-ahụ ga-enwetaghị na bọs ma ọ bụ gị ndị ọzọ haziri n'aka iga n'ime Amalfi.
Ya mere, ihe mere ndị Naples-Portici akara? The Faculty of Agriculture nke University nke Naples Federico II bụ isi ọrụ a akara ruru ya mfe nnweta Ugwu Vesuvius gbawara. The mbụ ụgbọ okporo ígwè eme njem na-aga Italy ka dị taa.
Linesgbọ okporo ụzọ mbụ dị n'Italytali megheere ya ụzọ ọdịnihu nke njem ụgbọ oloko na mba. Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mma ụgbọ okporo ígwè njem bụ ebe a. N'ileghachi anya azụ na mbụ ụgbọ okporo ígwè na njem mgbe mere na Italy, anyị pụrụ ijide n'aka na ọ bụ ezie na a ọtụtụ ihe agbanweela. The mma nọgidere nnọọ ka captivating mgbe dị ka ọ bụ ugbu a.
So now that you learned about The First Train Trip Ever Made in Italy, are you thinking of Ntinye akwụkwọ A Train Ticket for a European train trip? Ọ gaghị 3 nkeji na anyị na saịtị na-ahụ ndị dị ọnụ ala tiketi maka gị ụzọ gasị. Nbanye anyị na saịtị ugbu a ka Book Ụgbọ oloko.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-first-train-trip-ever-made-in-italy%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed.
Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem travelitaly